Fiatrehana fahavaratra: diovina ireo lakandrano | NewsMada
Fiatrehana fahavaratra: diovina ireo lakandrano
Par Taratra sur 08/09/2018
Amboarina ny fantson-drano maloto eto Antananarivo Renivohitra amin’iny 67 ha iny. Apetaka roa metatra any ambany arabe izany fantsona izany hahafahan’ny rano (lakandrano Andriantany) hivoaka.
“Fantsona DN600 mena miisa roa ary tsy moramora ny manao izany”, hoy ny fanazavan’ny teknisianina. Nisy ny famatsiam-bola avy amin’ny AFD sy ny Vondrona eoropeanina amin’ny alalan’ny tetikasa PIAA sy ny orinasa Sogea Satom. Efa manao izay ho afany hanafaingana ny asa izy ireo eo ambany fitantanan’ny Agetipa. Miara-miasa amin’izany ny CUA DTP/DTMU/DUD, ny Apipa, ny Samva, ny AFD, ny MATSF… ny polisy monisipaly, ny polisim-pirenena, ny boriborintany, ny fokontany….
Eny Isotry sy Antohomadinika indray, hasiana milina vaovao hanosika ny rano maloto anaty tanàna hiakatra ho ao amin’ny lakandranon’Andriantany ny “station de pompage” dimy eto Antananarivo. Mbola tetikasa PIAA hatrany izany.
Efa tonga eto Madagasikara ny milina voalohany ka hapetaka ao Anatihazo Isotry “Bassin de retention”. Loarana diovina koa ny fotaka ao ary efa afaka ny tsinkafonkafona.
Hisahana ny fanadiovana ny lakandrano hafa C3 ao Anosibe, ao Cenam, ao 67ha ary ao Ankasina ny banky iraisam-pirenena.
Mbola misy tapa-bolana ihany koa vao vita ny tetezana Betongolo. Soloina lehibe ny fantsondrano hahafahan’ny rano maloto Vallée de l’Est hivoaka mafy isaky ny orambe ary tsy hihoatra hamono olona avy ety ambony tetezana intsony. Miteraka fanelingelenana amin’ny fifamoivoizana eny Betongolo, eny Besarety, eny Rasalama, eny Antsahabe ary eny Antsakaviro izany fanamboarana maharitra ela izany.
Efa tetikasa tamin’ny taona 2013-2014 ity fanadiovana lakandrano iarahana amin’ny mpamatsy vola ity, saingy izao vao vita ny fandalinana teknika sy vola, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Natao izao fanadiovana sy fikarakarana ny lakandrano izao hampihena ny tondradrano eto Antananarivo isaka ny fotoam-pahavaratra, indrindra ho an’ny eny amin’ny faritra iva.